Life raaxo leh Manager Password Android
The casriga ah, kiniin iyo computer haysta ku dhowaad wax walba oo maalin ka maalin ka mid ah oo dadka ku tiirsan, kuwaas oo qalab shaqo maalin kasta oo ay la socdaan maaweelada. Laakiin intaas oo dhammu waxay u baahan yihiin hal shay, password. Si loo ilaaliyo xogta iyo macluumaadka lagu tilmaamay, in aad u baahan tahay si ay u dejiyaan sirta xoog leh oo adag. Laakiin aad la kulmi karto waqti adag marka aad illoobin sirta ah kuwaas. Sidaas waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay qalabka qaar ka mid ah si ay gacan uga badbaadin kuwaas sirta ah, tababare password.
Qeybta 1: Best 5 Android Password Manager Apps Qeybta 2: Wondershare MobileGo for Android in Maamul Android Apps Manager Password
Qeybta 1: Best 5 Android Apps Manager Password
Tababare Password Android waa app madal Android ku salaysan taas oo kaa caawin doona inaad si abaabulo sirta ah ama codes PIN casriga ah aad Android ama kiniiniga. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwan soo socda shanta barnaamijyadooda Tababaraha password Android ka Google Play dukaanka app.
Keeper® Password & Data yiri- 4.4 / 5 Free
aWallet waa tababare free Android password iyo aad u fududahay in la isticmaalo. App Tani ayaa xaqiijisan doonta oo dhan sirta ah sida xisaabaha internetka, macluumaad credit card, identifications e-bangiyada, iwm Inkasta oo aad u badbaadiseen sirta aad u badan, waxaad ka raadin kartaa mid aad rabto in aad la feature raadinta. Iyo feature ugu naalloon karo waa xayaysiinta lahayn. Oo waa inaad sidoo kale abuuri kara iyo edit category xogta mar kasta oo aad rabto in aad ka. Its feature qufulka Auto ayaa xaqiijisan doonta sirta ah.
Download aWallet ka Google Play Store >>
RoboForm waa tababare free password u Android iyo PC. Waa tababare sirta ah iyo foomka plugin filler ugu wanaagsan ee daalacashada Firefox & hoomboro 2012. Sidaas darteed haddii aad ku badbaadi macluumaad login aad daaqadaha iyo Mac, waxaad isticmaali kartaa macluumaad login ku saabsan qalabka Android aad la mid account RoboForm. Faa'iida oo kaliya waa in ay interface. Waxay leedahay interface isla version PC.
Download RoboForm ka Google Play Store >>
Dashlane waa mid ka mid ah app Tababaraha sirta ah ugu awoodda badan uguna adag Android ee suuqa. Waxay ku siin doontaa baaxadda dheeriga ah ee IDs aad duwan, qoraalo, macluumaad credit card, rasiidhada ama wax hababka lacag bixinta. Wax baad kaydin karaa cinwaanada kala duwan, macluumaadka shakhsiga ah ama lambarada telefoonka gacanta loo isticmaalo ikhtiyaaraadka auto ka dheregno Dashlane ah. Dashlane dajiyaan doonaa database ka Tababaraha kooxda kale password si fudud. Dashboard Security of app this baari doona sirta aad u tabar daran oo auto xiri doonaa xisaabtaada.
Download Dashlane ka Google Play Store >>
Waa daruur ku salaysan Android password Tababaraha app. mSecure hayn doonaa gurmad xogta iyo samatabbixin doonaa ammaan tirtiri xarunta sida ay baahidaada. Ka sokow, dardaaran aad awoodaan in ay curiyaan password xoog, si toos ah u xirto app ah, sii e-mail gurmad ama qabsadaan macluumaad login web isticmaalayn app Tababaraha password. Laakiin si aad u hesho app this, waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan $ 9.99.
Download mSecure ka Google Play Store >>
5. Keeper® Password & Data yiri-
Waa hagaag, Keeper® Password & Data yiri- waa tababare free password Android kale. App Tani ilaalin doonaan macluumaadka khaaska ah iyo password ka aamin hanjabaad online iyo offline la military sirta AES. Sida tababare kale password, waxaad kaloo sameyn kartaa gurmad iyo soo celinta xogta sirta ah haddii aad rabto. Oo weliba waxa kale oo aad u hagaagsan kartaa macluumaad password aad u dhexeeya telefoonada, kiniiniyada iyo kombiyuutarada. Sidoo kale la kaydinta daruur waxaad ku hayn kartaa sirta ah sida badan ee aad awoodid.
Download Keeper® Password & Data yiri- ka Google Play Store >>
Qeybta 2: Wondershare MobileGo for Android in Maamul Manager Password Android Apps
Wondershare MobileGo for Android waxaa dhan-in-mid Tababaraha Android si ay u maareeyaan barnaamijyadooda, xiriirada, sawiro, videos, fariimo iyo sidoo kale macluumaadka gurmad aad on your computer. Aan ka hadlaan sida ay u baxdo iyo maamuli Android app Tababaraha password:
Download / rakib / uninstall Manager / Dhoofinta / Share Password u Android Apps
Tallaabada 1. Isku telefoonka aad Android si aad u computer la cable USB.
Tallaabada 2. Tag Google Play dukaanka Apps bidixda iyo raadin barnaamijyadooda Tababaraha Password Android, sida "RoboForm".
Tallaabada 3. Dooro mid aad rabto oo guji rakib si ay u rakibi qalabka Android aad.
Tallaabada 4. Riix Apps khaanadda tagay. On widnow app managenent ah, rakibi, uninstall, dhoofinta wadaagaan barnaamijyadooda Tababaraha password Android.
Kaabta Android Phone & Soo Celinta Si fudud
Data kaabta ka Device Android inay PC
3 Hababka si SMS kaabta on Android Phone
> Resource > Android > Life raaxo leh Best 5 Manager Password Android